Guddoomiyaha Gobolka Benaadir oo Xilka si Rasmiya ula Wareegay – PuntlandNews24
Muqdisho,Janaayo 30, 2018—Guddoomiyaha cusub ee gobolka Benaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) ayaa xaflad si heer sare loo agaasimay oo ka dhacday xarunta gobolka Benaadir si rasmiya xilka ugala wareegay guddoomiyihii hore Mudane Taabid Cabdi Maxamed. Xafladda xil wareejinta oo ay ka soo qaybgaleen madax sare oo uu ka mid yahay ku-simaha Madaxweynaha, ahna Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Baarlamaanka JFS, Wasiirro, Xildhibaanno,Madaxweynaha Maamulka HirShabelle, Saraakiil, Siyaasiyiin, Diblumaasiyiin iyo qaybaha bulshada ee kala duwan ayaa ku qabsoomtay jawi wanaagsan.
“ Waan u mahadcelinayaa madaxda sare ee qaranka, waxgaradka, siyaasiyiinta iyo maamulkii hore oo runtii wax badan soo qabtay. Waa guul in si nabad oo dimuquraadi ah xilka la isugu wareejiyo, waana dhaqan wanaagsan oo aan bogaadinayo “ Ayuu yri Guddoomiye Eng. Yarisow
Raila Odinga oo loo dhaariyay madaxweynimo